थाहा खबर: कृष्णहरि बाँस्कोटा
| भदौ ३१, २०७७
सरकारी सेवालाई बढि सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउन निजामती सेवा गठन भएको हो। यस सेवा संचालनका लागि निजामती कर्मचारीहरू नियुक्ति भएका हुन्। यसर्थ, निजामती सेवा गठनको मूल मर्म अनुसार यसको पक्षमा काम गर्ने कर्मचारी यसमा सर्वोत्कृष्ट वा उत्कृष्ट कर्मचारी ठहरिन...
सरकारले वातावरण दिए निजी क्षेत्रले नै गर्न सक्छ
| भदौ २१, २०७७
निजी क्षेत्र सरकारको शत्रु हो? यो प्रश्न जुम बैठकमा एक महिला व्यवसायीले सोधेकी हुन्। उनको भनाइ थियो, व्यापारीले सरकारलाई सघाएका छन्। आम जनताको दैनिक जीवनमा आवश्यक वस्तु र सेवाको निर्वाध आपूर्ति गरेका छन्। सरकारले एकहप्ताका लागि राजश्व असुली गर्न लकडाउन खोल्दा सोही अव...
राजनैतिक नियुक्तिमा परीक्षा र सार्वजनिक बहसको खाँचो
लामो समयदेखि विभिन्‍न संवैधानिक निकायमा पद रिक्त भएर पनि पूर्ति गर्न सकिएको छैन। राजनैतिक नियुक्तिका पदमा जुन व्यक्ति नियुक्ति भएका छन्, ती हरेक जसो आलोचनाको शिकार भएका छन्। कतिपयलाई अदालतबाट पदबहाली नगर्नु भन्‍ने आदेश जारी भैरहेको छ। सरकार अधिकांश नि...
शत्रुलाई सिद्याउने एउटा काइदा हो, त्यो उसँग मित्रता कायम गर्नू। यसबाट शत्रुता तत्कालै मित्रतामा रुपान्तरित हुन्छ। तपाई रिसाउनुभएको हो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर, हो भन्दा शत्रुता बढ्छ। तर, होइन भन्ने जवाफ दिँदा मित्रता अभिवृद्धि हुन्छ। तपाईंका यी यी कुरामा मेरो विमति छ भनिँ...
जीवन केही गर्नका लागि हो। यसर्थ, सधैं कुनै न कुनै काममा तल्लिन रहनुपर्छ। कुनै अवसर आइपुग्नुअघि नै त्यो अवसरका लागि आफू योग्य बनिसक्नुपर्छ। यसैले भोलि तयारी गरौंला भन्नु हुँदैन। आजको समय हाम्रो हातमा छ, जसको भरपुर उपयोग गर्नुपर्छ। भनिन्छ, समय आउँछ फर्किंदैन,...
नेपाल प्राकृतिक स्रोत र खानीमा अत्यन्त धनी छ। हाम्रा धार्मिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख भए अनुसार नेपाल स्वर्णभूमि रहेकाले यहाँ बहुमूल्य खनिज प्राप्त हुने बताइएको छ। पृथ्वी नारायण शाहको दिव्योपदेशमा 'खानी भएका ठाउँमा गाउँ भया पनि गाउँ अरु जगामा सारीकन पनि खानी चलाउनु'...
भुत्ते कर्मचारी प्रशासनलाई पाइनको खाँचो
बूढो बाघ र स्याल तन्‍नेरी भन्‍ने नेपाली उखान छ। अर्थात् बाघ बूढो हुँदैमा स्यालभन्दा कमजोर हुने होइन भन्‍ने अर्थमा यसलाई लिइन्छ। यो उखानसँगै आज मलाई मुलुकी प्रशासनको बागडोर सम्हाल्ने कर्मचारीतन्त्रका तमाम क्रियाशील सत्‍पात्रलाई सलाम गर्दै अझ बढ्न उत्प्रेरित गर्...
आत्तिएका उपभोक्ता : उत्पादन र आपूर्तिका प्रश्‍नहरू
कोभिड १९ को प्रभावले विश्वलाई नै गाँजेको छ। हामी नेपाली पनि हाल विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छौं। यस स्थितिमा कोरोना फैलिन नदिन सबै उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ। चैत ११ गतेदेखि लगाइएको लकडाउन केही खुकुलो पारिए पनि कोरोना आतंक यथावत छ। यस अबस्थामा क्वारेन्टाईनक...
नेपालको संविधानको धारा ४१ मा ज्येष्ठ नागरिकको मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ। जसमा 'ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ' भनिएको छ। त्यसैले होला: यसपटकको बजेटमा पनि मुलुकभर ज्येष्ठ नागरिक आश्रमको न्यूनतम् पूर्वाधार र सुविधाको मा...
कोरोना संकटपछि यसरी बढाउन सकिन्छ रोजगारी
| जेठ ११, २०७७
नेपालको अहिलेको मख्य समस्या भनेकै बेरोजगारी हो। हाल करिब ४५ लाख युवा वाह्य रोजगारीमा छन्। जस्को कारण, कयौँ गाउँहरु युवाविहीन भएका छन्। तर, ती युवा कोभिड-१९ का कारण स्वदेश फर्किँदैछन्। करिब ६ लाख छिट्टै फर्किने विभिन्‍न अध्ययनले देखाएको छ। प्रत्येक वर्ष नेपाली...
यो दुनियाँका प्रत्येक व्यक्ति सूचनामैत्री हुनुपर्छ। सूचनाको हकको अभ्यास घरबाटै आरम्भ हुन्छ र हुनुपर्छ। हाम्रो मुलुकमा अझैपनि पुरुष नै घरको मूली हुने भएकाले निज घरबाट बाहिर जानुपूर्व कहाँ जान लागेको, अन्दाजी कति बजे फर्किने हो बताउनुपर्छ। घर नै प्रत्येक वालवालिकाको प...
आगामी बजेटको कार्यदिशा: खर्च कटौती र भिन्‍न प्राथमिकता
कोरोनाको कहरले विश्वअर्थतन्त्रलाई गाँजेको छ। यसले नेपाल जस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रहरु मात्र होइन विकसित र शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरु पनि अफ्टेरोमा पर्ने अनुमान गरिएको छ। यो अनुमानसँगै अनुदान र ऋण सहायतामा बजेटको ठूलो हिस्सा हुने गरेका नेपाल जस्ता देशहरु दोहोरो मारमा पर्ने दे...